"De Smidse" indawo epholileyo kufutshane nomlambo iWaal
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLeo En Carin
I-Forge endala yakhiwe ngokutsha kwaye ngoku ihlangabezana neemfuno zanamhlanje. Ukusuka kwigumbi lakho lokulala unombono kumlambo waseWaal ulwandiso lweRhine, umlambo oxakekileyo, kunye neendawo ezikhukulayo kunye neelwandle ezinesanti. Umlambo ozolileyo iMaas ukufuphi. Thina, uCarin kunye noLeo, sikhetha ngexesha lokuhamba kwethu sihlala sifumana indawo epholileyo apho sinokuphekela khona kwaye sizenzele isidlo sakusasa sodwa ngexesha ebelisifanele kakhulu. Ngale nto engqondweni siye savulela iindwendwe zethu iDe Smidse.
Ngasemva kweDe Smidse kukho ipatio egqunyiweyo apho unokuhlala khona kwaye uphumle ngasese.
Okukhethekileyo ngaphakathi kwegumbi kukuba, ukusuka kwigumbi lokulala-kumgangatho uya kuba nombono osezantsi kwigumbi lokuhlala.
Lo mmandla ubizwa ngokuba yi "Bommelerwaard" eneneni isiqithi esiphakathi kwemilambo emi-2. Zininzi
imoto/izikhitshane zebhayisekile ukuzisa ngaphesheya. Uninzi lwabantu luza apha ngebhayisekile, indalo kunye nenkcubeko efana neCastle Ammersoyen. Ukusuka kwi-Smidse ungakhwela kwi-dyke naphakathi kweegusha ukuya kwindawo yolondolozo lwendalo e-Munnikenland (iikhilomitha ezi-3) ukuya phambili ukuya e-Castle Loevestein (i-1 km eyongezelelweyo.) kwaye ngesikhephe (ngeebhayisekile kuphela) ukuya kwidolophu enqatyisiweyo yaseWoudrichem. Ukukhwela kwi-dyke ejikelezayo edlula iilali ezintle ukuya kwidolophu endala yaseZaltbommel enemarike yi-11 km. 300 mt. ukusuka eDe Smidse yimoto/isikhitshane sebhayisekile. Ukusuka apho yi-40 km. ukuya eUtrecht okanye eRotterdam, okanye i-10 km. kumzi-mveliso weglasi owaziwayo kwihlabathi eLeerdam. I-Den Bosch kunye ne-St. Jan Cathedral okanye i-canalride enqumla kwisixeko esidala yi-23 km. Kananjalo ngemini emnandi unokwenza uhambo ecaleni kweWaal okanye ulale kwenye yeelwandle ezininzi ezinesanti.
Umbuki zindwendwe ngu- Leo En Carin
Ngomhla wokufika kwakho siya kukwamkela ngokobuqu, sikuxelele konke omawukwazi kwaye sikunike izitshixo. Ngexesha lokuhlala kwakho siya kuba lapho ukuba kuyimfuneko.
ULeo En Carin yi-Superhost